MB 2018 Noofambar, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Noloshiisa, dhimashadiisa iyo sarakicistiisa, Ciise wuxuu siiyay aadanaha qiimo uu kaga sarreeyo wax kasta oo aan waligeen ka shaqeyn karno, kasban karno ama xitaa aan qiyaasi karno. Rasuul Bawlos wuxuu ku sifeeyay sidan: “Haa, wali waxaan u arkaa inay wax u dhimayso aqoonta wanaagsan ee Masiixa Rabbigeenna ah. Oo aawadiis ayaa waxyaalahan oo dhan laygu xadgudbay, laakiinse waxaan u malaynayaa inay nijaas tahay inaan Masiixa ku guuleysto (Filiboy 3,8). Bawlos waxa uu ogaa in noolaanshaha, xidhiidh qoto dheer oo lala yeesho Ilaah xagga Masiixa inuu yahay qiimo aan la koobi karayn - qiimo jaban - marka la barbar dhigo wax kasta oo il dhimis ah weligeed bixin kara. Waa uu gartay go'aankan isagoo eegaya dhaxalkiisa ruuxiga ah, shaki la'aan wuxuu ku xasuusanayaa ereyadii Sabuurradii 8: "Waa maxay dadku oo aad u xusuusataa isaga iyo wiilka aadanaha oo aad u xannaanaysaa?" (Sabuurradii 8,5).
Weligaa miyaad la yaaban tahay sababta uu Eebbe ugu yimid shakhsiyan ciise siduu isagu yeelay? Miyuusan la imaan karin ciidan jannada leh oo muujin kara xooggiisa iyo ammaantiisa? Miyuusan u imaan karin xayawaan hadal ah ama sida superhero oo ka socota majaajilada Marvel? Laakiin sida aan ognahay, Ciise wuxuu ku yimid hab ka ugu kibirsan - sida ilmo yar oo aan caawin lahayn. Qorshihiisu wuxuu ahaa in si xun loogu dilo. Ma caawin karo laakiin waxaa laygu dhiirigelinayaa in aan ka fikiro runta yaabka leh ee uusan isagu noo baahnayn, laakiin si kastaba wuu yimid. Ma hayno wax aan siin karno oo aan ka ahayn sharaf, jacayl iyo mahadnaq.
Maadama uusan Eebbe noo baahnayn, su'aasha ahmiyaddeena ayaa soo baxda. Marka loo eego dhinaca fikirka wax ahaan, waxaan qiime yar nahay. Qiimaha kiimikada sameysa jirkeena wuxuu gaarayaa CHF 140. Haddii aan iibinno dhuuxa lafta, DNA-da iyo xubnaha jirkeenna, qiimuhu wuxuu kici karaa dhowr milyan oo faran. Laakiin qiimahan lama barbar dhigi karo qiimaheena runta ah. Maaddaama abuur cusub oo Ciise ah, aan qiimo weyn ku lahayn. Ciise waa isha laga helo qiimahan - qiimaha noloshu ku noolayd xiriir la leh Ilaah. Saddex-keliga ah Ilaah baa nooga yeedhay meelna aan ugula joogno isaga weligiis xiriir wanaagsan, quduus ah iyo xiriir jacayl. Xiriirkani waa midnimo iyo bulsho aan si xor ah oo farxad leh u qaadanno wax kasta oo Ilaah na siiyo. Marka loo eego, waxaan isaga ku aaminnay wax kasta oo aan nahay oo aan haysanno.
Masiixiyiinta fikirka badan qarniyo badan ayaa siyaabo kala duwan u sharaxay ammaanta jacaylkan jacaylka. Augustine wuxuu yiri: «Adiguba waxaad nooga dhigtay adiga. Qalbigeennu waa xasilloon yahay ilaa uu adiga kaa nasto ». Aqoonyahanka sayniska dabiiciga ah ee reer France iyo falsafadda Blaise Pascal wuxuu yiri: "Qalbiga qof kasta oo bini aadamka ah waxaa jira faaruq ah oo keliya oo uu Eebbe isaga buuxin karo". CS Lewis wuxuu yidhi: "Ma jiro qof soo maray farxadda ogaanshaha Ilaah ee weligiis jeclaan lahaa inuu u beddelo farxadda adduunka oo dhan." Wuxuu kaloo yiri annaga waxaa bini aadamka loo sameeyay inaynu damacno Eebbe.
Eebbe wax walba wuu abuuray (oo aynaan innagu ku jirin aadanaha) maxaa yeelay “Ilaah waa jacayl”, sida uu rasuulku John u dhigay (1 Yooxanaa 4,8). Jacaylka Eebbe waa xaqiiqada ugu sareysa - aasaaska dhammaan xaqiiqooyinka abuuray. Jacaylkiisu aad iyo aad buu qiimo weyn u leeyahay waana jacaylkiisa madax furasho iyo isbadelid ee uu ina keenayo taasina waxay qeexeysaa qiimaheena runta ah.
Yaanan waligaa iska indho tirin xaqiiqada jacaylka Eebbe inagu abuuray aadanaha. Haddii aan ku jirno xanuun, jidheed ama shucuur ahaan, waa inaan xasuusnaano inuu Ilaahay ina jecel yahay oo uu xanuunka oo dhan ka qaadi doono sida qorshuhu yahay. Markaan murugada, khasaaraha, iyo murugada leenahay, waa inaan xasuusnaano inuu Eebbe ina jecel yahay oo maalin maalmaha oo dhan ay tirtiri doonto dhammaanteed.
Markii carruurtaydu yaraayeen, waxay iweydiinayeen sababta aan u jeclahay iyaga. Jawaabtaydu ma ahayn inay ahaayeen carruur qurxoon oo umuuqda wanaag (waxay ahaayeen iyo wali yihiin). Waxay ahayd in aan ardayda fiicnayn (taas oo run ahayd). Halkii jawaabtaydu waxay ahayd: "Waan ku jeclahay sababtoo ah waxaad tihiin carruurtayda!" Waxay ku dhacdaa qalbiga sababta uu Eebbe noo jecel yahay: "Waxaan u nahay isaga taasina waxay nooga dhigaysaa mid ka qiimo badan sidii aan waligeed ku fikiri lahayn". Waa inaanan waligeen iloobin!
Aynu ku faraxno qiimaheenna runta ah sida kuwa Ilaah jecel.